Aaway Bentley oo la socota aagga madaniga ah - Geofumadas
Mee, 2010 Engineering, Microstation-Bentley, topografia
Wow, mawduuca waa iska yeelyeel, kaliya waxaan rabaa inaan milicsado waxa aan fahmi karo. Waxaan bilaabay isku day kala hadal Geopak, laakiin hadda kaliya in PowerCivil uu yimid uun, wuxuu i badbaadiyaa adduunka, waa inaan xaqiijiyaa haddii wax kasta oo ay sheegto ay run tahay.
Bentley ka hor ...
Haddii ay jirto mudnaan uu Bentley leeyahay, waa qaybta injineernimada. Taariikhda Integraph waa muddo dheer Tan macnaheedu, tan iyo sannadkii 70, waxaa jiray xalal injineernimo ah Meelaha waaweyn, ka hor inta ay jirtay Microstation magacaas iyo ka hor intii aysan jirin Civil3D, ama Bentley AutoDesk.
Dhammaan alaabooyinka injineernimada ayaa si tartiib tartiib ah loogu xidhay a sancocho badan ama ka yar oo soo koobay sida soo socota:
InRoads. Tani waxay yeelatay lix dhadhan:
-Duufaanta Wadooyinka & Nadaafada
-Ku dhiirrigeliyo Inroads.
Geopak. Midkani wuxuu lahaa noocyadan:
-Waxbarashada Aqoonyahanka Ganacsiga ee Geopak
- Awoodda Geopak
MX. Kani waa nooc xiiso leh oo wax walba lahaa, intaasna inbadan bay u ahayd deegaanka Ingiriiska, sidaa awgeed waxaa dhaqan geliyey inta badan Ingiriiska iyo Hindiya. Had iyo jeer u janjeedha xagga naqshadeynta waddada, oo ku socda AutoCAD. Waxay ujirtaa xitaa noocyada AutoCAD 2008 - Ma garanayo haddii jacaylku sii socon doono - hadda waxay u jirtaa Microstation iyo noocyadii ugu dambeeyay maalin kasta waxay umuuqataa InRoads. Tani waxay naga dhigeysaa inaan sifiican u fahamno boostada asxaabta Ingiriisiga oo isbarbar dhigaya MX iyo Civil 3D.
Haddii aan rabno inaan aragno sida Bentley uu isugu taagay aagga Injineerinka, waa inaan aragnaa khariidaddan Mareykanka. Waxay ku saabsan tahay Waaxaha Gaadiidka: 26 oo ka mid ah gobollada hadda isticmaala InRoads (52%), 18 Geopak (36%) iyo 2 MX (4%).
Xaaladda Qalabka Ciidanka Qalabka Engineering Engineer waa mid la mid ah, 23 waxay isticmaashaa Inroads, iyo 4 waxay isticmaalaan MX.
Sidee Bentley u timid inay iska dhigto sidaas, waa mudnaan ah Intergraph, oo ahaa milkiilaha InRoads ilaa Diisambar sanadka 2000, markii Bentley lagu iibsaday si buuxda oo cad, isticmaalka macaamiisha.
Waqtiga Integraph ee waqtiga, oo ay ku jiraan InRoads ayaa ka shaqeeyay IntelliCAD, Maalin dhaweyd waxaan helay nooc u ordaya sida soojiidashada 'Microstation 95', oo xiise leh in ninku yiraahdo meeshaas kama dhaqaaqi doono maxaa yeelay aad buu u faraxsan yahay. Way ku fiican tahay Bentley, maxaa yeelay uma maleynayo inaan ka heli karo adeegsade madax adag oo adeegsanaya AutoCAD R12.
Heerka Latin America, oo aan ka tirin kuwa Brazil oo ah nasasho kale, waxay ku fiican yihiin isticmaalka InRoads:
Jaamacadda Katooliga ee Lima
Grana iyo Montero
Shirkadaha Dadweynaha ee Medellín
Biyaha Bogota Bogota
Bentley waqtiyadii dhowaa ...
Dhinaca AutoDesk, waxaan ku aragnay horumarinno xiiso leh, in kastoo aysan isla socoshadaas ahayn, oo ay sameeyeen iskaashatooyin nool ama shirkado ay iibsatay AutoDesk. Kaasi waa kiiska khadka Eagle Point, SoftDesk, CivilCAD, Land Desktop, in la magacaabo inyar. Mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay iyo waxa aan u maleynayo in AutoDesk uu sii hayn doono waa Civil3D, oo ay ku jiraan waxa uu sameeyay AutoCAD Map.
Maxaa dhacaya ayaa ah in AutoDesk ay leedahay meeqaam caalami ah oo ku yaal meeraheeda kala duwan, sida ku cad dukumiinti ay soo bandhigtay AutoDesk, 6 milyan oo isticmaale oo adduunka ah ayaa adeegsada wax ku shaqeeya AutoCAD oo kuwan ka mid ah, 30,000 waa isticmaaleyaal Civil3D Xogtaan ugu dambeysa waxay u egtahay mid fiican, laga yaabee tani waa sababta wiilasha Bentley aysan u lahayn wax ay doortaan marka laga reebo farxa marka Waxay sheegaan iyaga la socota cilad weyn (ereyga suugaaneed ee laga waraabiyo bogga Facebook).
Weli, waxaa la sheegi karaa in Bentley ay ku faraxsantahay booskeeda berrinka dhirta iyo injineernimada, macaamiisha aad badan weyn. La soo wareegitaankeeda cusub iyo horumarkiisa waxaa looga dan leeyahay in lagu xoojiyo horumarkiisa dhanka I-model, XM (MX), kuwaas oo aan la yaabay oo hadda waxaan xasuustaa: STAAD qaababka dhismaha, Hababka Haestad ee biyaha iyo ginto loogu talagalay geotechnics.
Inkastoo AutoDesk ay sii badanayso ka qaybgalka filimka, waxaa macquul ah in Bentley ay ku talo jirto in ay xoojiso dhulkeeda marka ay cusbooneysiiso tiknoolajiyadeeda.
Halka Bentley uu socdo ...
Waad aragtay, xitaa aniga maalin uun way igu adkaatay inaan fahmo dhadhanka InRoads, oo macno samaynaya laakiin hal sabab ama mid kale ayaa had iyo jeer ka gaabiyo waxqabadka kan kale. Sidaa awgeed, Bentley wuxuu aadaa waxa loogu yeero PowerCivil, oo ay ku jiraan:
PowerCivil ee USA
PowerCivil ee Spain
PowerCivil ee Latin America.
Aniga aragtidayda, waa fikrad aad u fiican, gaar ahaan sababtoo ah ee qalabka kor ku xusan, in kastoo had iyo jeer waxaa jiray PowerInRoads iyo version PowerGeopak, inta kale waxay ahaayeen shatiyada u baahan in liisan ka Microstation.
Iyo mustaqbalka ee InRoads?
InRoads waxay sii wadi doontaa inay noqoto hooyada digaagga ee adeegsadayaashii hore ee goobtan, sidoo kale kuwa haysta rukhsadda Microstation oo kaliya ubaahan inay kasbadaan InRoads, iyada oo ay kujiraan faa'iido darrooyinka kaladuwan (duufaanta & nadaafadda, Daraasadda). Iyada oo tan ay faa'iido darradu tahay:
InRoads ma lahayn habka xayeysiiska, si fiican, in sidoo kale Vulcan. Madal kasta ayaa adeegsada, macdanta, dhismaha, injineernimada. Sidoo kale ma lahayn wax bullaacad ah (oo hadda lagu soo daray 'InRoads Storm & Sanitary version') iyo qaab dhismeedka dhulka (InRoads Survey).
Sidaas, waa maxay PowerCivil?
PowerCivil waxay leedahay wax kasta oo qurux badan oo u baahan injineernimada. Noocyada loogu talagalay Spain iyo Latin America waa isku mid, oo ay ku kala duwan yihiin qawaaniinta ay keenaan, USA waa ruxii kale ee gringos. Sidaa darteed, haddii ay lagama maarmaan ahayd in la qeexo:
PowerCivil: Waa 'InRoads' oo leh dhufto, biyo mareenno, jaangoyn, MicroStation iyo Isbaanish.
Waan arki doonaa sida aan dib u eegeyno shaqadooda.
Post Previous" Hore Roger Penwill, qosolka cadistas
Post Next PowerCivil loogu talagalay Latin America, aragti horeNext »